जनवरी 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment महिनावारी
कस्तो अचम्म ! नेपालमा महिनावारी हुदाँ छुन हुदैन भन्ने चलन छ, तर यी देशमा महिनावारीका बेला महिलालाई विदा दिइन्छ ! महिनावारी भनेको शारीरिक परिवर्तनमध्येको एक परिवर्तन हो । यो हाम्रो शरीरमा भएका हर्मोनहरुको मात्रामा आउने परिवर्तनका कारणले हुने गर्दछ । महिनावारी प्राकृतिक सरसफाइ प्रक्रिया हो र महिनावारी हुनु भनेको एउटी केटी हरेक महिना गर्भवती हुन तयार हुने सङ्केत हो । यदि महिला महिनावारी भइन् भने पाठेघरले बनाएको रगतको तह विस्तारै योनिमार्ग हुदै रगतका रूपमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ जुन रगतको रङ्ग गाढा रातो हुन्छ र कहिलेकाही ढिका जस्तो भएर जमेको रगतका रूपमा पनि बाहिर निस्कन्छ ।
साधारणतया महिनावारी १२ देखि १५ वर्षको उमेरमा सुरू हुन्छ; कसैमा आठ वर्ष देखि नै महिनावारीको लक्षण देखिने गर्दछ जुन साधरण मानिन्छ । महिनावारीको अन्तर लगभग २८ दिन हुने गर्दछ । महिनावारी महिला ४५ देखि ५५ भित्रमा सकिन्छ । महिनावारी हुनु भनेको एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । एक वयस्क युवती सन्तान उत्पादन क्षमता परिपक्क भयो भन्ने कुरा महिनावारी भएपछि बुझिन्छ। तर नेपालमा महिनावारी भएको बेला महिलालाई गर्ने व्यवहार सस्कार परम्परा निकै संकुचित छ । प्राकृतिक रुपमा पाएको कुरालाई परम्परा सस्कारसंग जोडेर स्याहार सुसार भन्दा बढी अपहेलना घृणा तिरस्कार गर्ने चलन अझै पनि हटिसकेको छैन ।यस्तो बेलामा शारीरिक रुपमामा महिला कम्जोर हुने गर्दछन् जुन बेला अन्य समयमा भन्दा बढी ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । तर विश्वका केही देशहरुमा भने महिनावारीका बेला महिलालाई विदा दिइन्छ ।
← जनमत सर्वेक्षण – पृथ्वी जयन्तीलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ मान्नुपर्छ भन्ने बहसमा तपाईको धारणा के छ ?
जान्नुहोस् ! तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु →
डिसेम्बर 20, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
One thought on “कस्तो अचम्म ! यी देशमा महिनावारीका बेला महिलालाई विदा दिइन्छ”